Kontomeeyo qof oo Somali ah oo ku le?eday doon ay saaraayeen oo ku degtay xeebaha Liibiya. – Radio Daljir
Tiriboli, May, 07 ? Inta la hubo Konton qof oo Somali ah iyo tiro kale oo Afrikan ayaa ku dhintay Dalka Liibiya ka dib markii ay la degtay doon ay saarnaayeen, taasoo ku sii jeedday dalka Talyaaniga oo rabeen inay dadku qaxooti ahaan u galaan.
Dadka dhintay ee Somalida ayaa maydkooda la helay 16 qof oo kaliya halka intii kalena la waayey lana aaminsan ayahy inay dhinteen, sida ay Daljir u sheegeen dad jooga magaalada Tiriboli ee xarunta Dalka Liibiya.
Doonta oo ahayd mid gabawday ayaa degtay wax yar ka dib markii ay ka baxday meel xeeb ah oo u dhaw caasimadda waxayna sidday in ka badan Sedex boqol oo qof oo u kala dhashay wadamada Afrika qaar kood, waxayna doonayeen inay galaan dalka talyaaniga.
Badda u dhaxaysa Talyaaniga iyo Yaman qabta kumanaan Afrikaan ah oo Somali ka mid tahay, kuwaasi ay la dageen doonyo tabardaran oo ay doonayeen inay ku galaan Qaaradda Yurub.
Boqolaal Somali ah oo joogay Liibiya ayaa u kala cararay xudduudaha dalka Liibiya uu la wadaago dalalka Masar iyo Tunusia, ka dib markii dalkaasi ay ka dillaaceen rabshadaha xukunka looga ridayo madaxweyne Qadaafi.